Nnwom 19 NA-TWI - Onyankopɔn anuonyam wɔ abɔde mu - Bible Gateway
Nnwom 18Nnwom 20
Nnwom 19 Nkwa Asem (NA-TWI)
19 Ewim da Onyankopɔn anuonyam adi! Ɛkyerɛ nea wayɛ mu pefee! 2 Ɛda biara ka kyerɛ da a edi so; saa ara na anadwo biara nso yɛ. 3 Ɔkasa nni mu, na wɔnte nne nso, 4 nanso wɔn nne kɔ wiase mmaa nyinaa ma wɔte wɔ asase ano nyinaa. Onyankopɔn bɔɔ atenae wɔ wim maa owia; 5 epue anɔpa ahotɔ mu sɛ ayeforokunu; te sɛ mmirikatufo a ne ho pere no sɛ osi mmirikakane. 6 Ofiti ase wɔ wim ano baabi twa mu kɔ fa. Biribiara rentumi nhintaw ne ho mfi ne hyew no ase.